Vhidhiyo nyowani inotiratidza inofungidzirwa kuti iPhone 7 isina headphone jack yekubatanidza | IPhone nhau
Mwedzi mishoma yapfuura, iyo inofungidzirwa kuti idonhe yakabatana neinotevera iPhone 7 yakaburitswa nedropper, asi isu tanga tiri mavhiki mashoma ayo angangoita mazuva ese, kana asiri ese, Tiri kutsikisa inofungidzirwa mifananidzo yeiyo iyo iPhone 7 ichave yakaita. Ino nguva isu tinokuratidza vhidhiyo yezvingave zvakaita iyo iPhone 7, mairi matinogona kuona kuti ramangwana iri Apple modhi yaisazove neyemusoro kubatanidza
Iyi vhidhiyo yakaburitswa neyeGerman webhusaiti TechTastic, umo matinogona kuonawo sei maantenna mabhendi aendeswa uye ivo havasisiri kuyambuka kumashure kwechigadzirwa. Chimwe chinhu chinokwezva kutaridzika ndiko kubuda kwekamera iyo pane dzimwe nguva takatokuzivisa iwe.
Iyi bulge inogona kuratidza kuti kamera ichagamuchira shanduko yakakura muhunhuKunyangwe iyo Cupertino-based kambani isingawanzo gadziridza kamera gore rega, saka hazvigone kuti iyo inotevera iPhone 7 igamuchire kugadzirisa mune izvi. Muvhidhiyo imwecheteyo tinogona kuonawo kuti Apple yakaisa sei nzvimbo nyowani yekuwedzera imwe mutauri kuchinhu, chimwe chinhu chatakambokurukura kare kunyangwe mamwe makuhwa achiti zvimwe.
Iko kutsakatika kweiyo jack kubatana zvingangoita kwete kuda kwevashandisi vazhinji, kunyanya kubva kune avo nekufamba kwenguva vakashandisa mari pamahedhifoni akanaka. Kana makuhwa aya akazadzikiswa, vazhinji vanozove vashandisi vanozomanikidzwa kugadzirisa zvishandiso zvavo, kungave kuburikidza nemheni jack adapter kana kushandisa yakawanda mari pamamodheru matsva, mamodheru ane mheni yekubatanidza ayo atovepo. Kubvira nguva mu musika.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » Vhidhiyo nyowani inotiratidza inofungidzirwa kuti iPhone 7 isina headphone jack yekubatanidza
Mune musoro wacho haufanire kuisa HAPANA jack kubatana - kana mini jack, ndoda - ????
chokwadi. Kutenda nekatsamba, yatogadziriswa
hapana ^ ^
Andinson Daniel Andujar akadaro
Ndeapi mapenzi ari Apple kana zvakadaro nekuti kana iwe uchida kuteerera mimhanzi uye kuchaja iyo yakapusa foni semadhongi, imwe ichaita izvozvo ??? Hameno kuti Mwari ndomaitiro avanozvimonera here aya
Pindura kuna Andinson Daniel Andujar